अस्पष्ट नीतिले अन्यौलमा विकास बैंक, कैलाशको मर्जरले डगमगायो बिश्वास ? - Bizpati
असार २०,२०७७ / ०३ : ४२
अस्पष्ट नीतिले अन्यौलमा विकास बैंक, कैलाशको मर्जरले डगमगायो बिश्वास ?
नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको नीति स्पष्ट नहुँदा विकास बैंकहरुको भविष्यबारे अन्यौलता बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली ल्याउँदा ७ दर्जन भन्दा बढी रहेका विकास बैंकहरु हाल २ दर्जन भन्दा तल आइसकेका छन।
हाल कायम विकास बैंक पनि नियामक निकायका बेलाबेलामा आउने अभिब्यक्तिले आफ्नो भविष्य स्पष्ट नभएको भन्दै धमाधम मर्जमा गइरहेका छन् । अहिले पनि आधा दर्जन बैंकहरु राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नीतिको पर्खाइमा छन् भने अन्य विकास बैंकहरु उपयुक्त प्रस्ताव आएमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विलिय हुन तयार रहेका छन ।
कुनै समयको १ नम्बरको कैलाश विकास बैंकले नै मर्जमा जाने सम्झौता गर्दा अन्य स्थापित र बलियो भनिएको विकास बैंकहरुको विश्वास डगमगाएको स्रोतको दाबी छ । वित्तीय क्षेत्रका जानकाहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने कैलाशले प्राइम कमर्सियल बैंकसँग गाभिने सम्झौता गर्नु नै विकास बैंकहरुको अस्तित्व समाप्त हुने संकेत हो । त्यस्तै बलियो रुपमा रहेको गण्डकी विकास बैंक पनि मेगा बैंकमा मर्ज हुन् जानुले अन्य विकास बैंकको विश्वास गुमेको जानकारहरु बताउँछन ।
तर बैंकर्सहरु भने कैलाश र गण्डकी मर्जमा जानु मात्रै नभएर नियामको स्पष्ट नीति अभावको कारण विकास बैंकहरु अन्योलमा रहेको बताउँछन । डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका एक अधिकारीले भन्छन् 'राष्ट्र बैंक एक थरी कुरा गर्छ, अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसको ठिक बिपरितको कुरा आउँछ, नियामकको नीति प्रष्ट नहुँदा समस्या भयो' । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर अब वाणिज्य बैंक र लघुवित्त मात्र रहने सार्वजनिक दिदै आएका छन् । तर त्यसको ठिक विपरित अर्थमन्त्री लघुवित्तलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्ने खालको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । नियामक कै यस्तो विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिबाट विकास बैंक अन्योलमा रहेको ति बैंकर बताउछन्। अहिले कायम विकास बैंकहरुले कुनै न कुनै रुपमा मर्जरको लागि छलफल चलाइरहेको तर केही बैंकहरु भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको स्रोतको दावी छ ।